Laba maalmood ka hor gobolka Malaga waxaa la yaabay dhacdo saadaasha hawada oo caadi ah oo ka dhacday aagga Cantabrian: cirif. Kuwani waa dabaylo xoog badan oo gaari kara ilaa 60 kiilomitir saacadiiba oo ay sababto jiritaanka hawo qabow iyo qoyaan badan oo keena in huurka uu gaaro 75%.
Dhacdada ka dhacday Malaga aad ayey uga awood yar tahay tan ka dhacda waqooyiga Jasiiradda sidaa darteed waxaa loo yaqaan mini gale.
Doqonnada ayaa ah ifafaalaha saadaasha hawada ee aagga Cantabrian waxaana lagu gartaa dabeylo xoog leh oo ay wehliyaan isbedello lama filaan ah oo heer kulka iyo duufaanno lama filaan ah. Malaga, dhacdadan ayaa ah mid aad uga awood yar maadama ay dabeyluhu gaarayaan 50 kiilomitir saacadiiba heer kulkuna uu hoos ugu dhacay 5 ilaa 10 digrii. Taasi waa sababta aagga badda Mediterranean-ka loogu yaqaanno goolalka yaryar.
Aaggan, ifafaaladan oo kale waxay dhacdaa markay si lama filaan ah dabaysha ka soo baxda galbeed ay si kadis ah ugu bedesho dabaysha bari. Cufnaan qabow ayaa galeysa aagga bari iyo badda Mediterranean ee jasiiradda keenaya dabayl caynkan oo kale ah iyo huur badan. Xamaasad ahaan, waxaa habboon in la yiraahdo ereyga galerna wuxuu ka yimid galanleyda Faransiiska wuxuuna ula jeedaa dabaysha ka dhacda waqooyi-galbeed
Dadka dagan Malaga waxay ku noolaayeen kuna dhib qabaan maalmahan labo ifafaale cimilo gebi ahaanba ka duwan. Dhamaadka usbuuca waxay la kulmeen waxa loogu yeero terral leh heerkul ka sarreeya 30 darajo iyo dareen runti ku cabudhinaya deegaanka oo dhan halka laba maalmood ka hor ay ka soo gaadheen qulqulka yar yar ee hawadu kacsan tahay iyo hoos u dhaca heerkulka. Kuwani waa laba dhacdo oo aad u caan ah bilaha guga.
Windguru Tarifa, waa maxay iyo sida loola tashado?